Waxaad dooranaysaa maalinta iyo waqtiga aad rabto in Daawadeyaasha Tooska ah loo diro durdurkaaga tooska ah ee Twitch.
Hel Daawadeyaasha Twitch Live
Iibso Waqtiyada Aad Noqon Doonto
Markaa Toos u Socda oo Iyagu Ha Yimaadaan!
Daawadayaasha Si Toos Ah U Yimaada
Daawadayaasha Dhabta ah, Ma jiraan Bots!
Tobanka Dariiqo Ee Ugu Sareeya Lagu Kordhiyo Daawadayaasha Tooska Ah ee Twitch
Dadku waxay had iyo jeer jeclaayeen ciyaaraha kombiyuutarka. Daah-furka ciyaarta fiidyaha ayaa had iyo jeer ku guulaysta inay abuuraan buuq aad u badan. Laakin hubinta ciyaar fiidyow cusub waagii hore aad uma sahlana. Inta badan, waa inaad fiirisaa garbaha asxaabta ama xubnaha qoyska ee u suurtagashay inay helaan ciyaarta cusub. Si kastaba ha ahaatee, arrimuhu hadda way is beddeleen, waxaana mahada iska leh aaladaha baahinta tooska ah sida Twitch.
Twitch waxay u dhacdaa inay noqoto goobta ugu weyn ee ciyaaraha fiidyaha khadka tooska ah ee adduunka. Waxaa la bilaabay 2011 waxaana u suurtagashay in ay garaacdo in ka badan 3.2 million users bishiiba sanadka ugu horeeya laftiisa. Saddex sano ka dib, Amazon waxay heshay Twitch, madalku hadda waxay leedahay in ka badan 140 milyan isticmaaleyaal firfircoon bishiiba.
Ma ogtahay in in ka badan 107,000 oo tabin toos ah ay ka dhacayaan Twitch wakhti kasta? Laga bilaabo Febraayo 2021, waxaa jiray ku dhawaad 9.5 milyan Twitch streamers adduunka oo dhan. Twitch wuxuu soo jiitaa in ka badan 40 milyan oo daawadayaal ah bishiiba kuwaas oo daawada muusiga tooska ah, tabinta ciyaarta muqaalka, iyo in ka badan. Kuwa ugu sarreeya Twitch streamers waxay kasbadaan si qurux badan, iyadoo qaarkood ay xitaa kumanaan doolar sameeyaan bishii. Waxay sii socotaa si ay u muujiso in qulqulka Twitch ay u horseedi karto shaqo faa'iido leh oo ku saabsan bandhigyada isdhexgalka ee soo jiidanaya daawadayaasha badan.
Bilaabida kanaalka Twitch macnaheedu maaha inaad si toos ah u bilaabi doonto inaad hesho lacag badan. Kanaalka Twitch ee kobcaya wuxuu u baahan yahay shaqo adag oo joogto ah, haddii aad tahay mid toos ah iyo haddii kale.
Sideed lacag uga samaysataa Twitch?
Awoodaada aad ku kasban karto Twitch waxay kuxirantahay inta badan nooca isticmaale ee aad tahay. Isticmaalayaasha Twitch waxaa loo kala saari karaa:
Isticmaalayaasha Twitch Maalin kasta
Inta badan isticmaalayaasha Twitch maalin walba ma laha ujeedo ah isticmaalka Twitch si ay lacag u sameeyaan. Waxay waqti ku qaataan masraxa ciyaarista iyo daawashada kuwa kale oo ciyaaraya. In yar oo isticmaala Twitch maalin walba ah ayaa laga yaabaa inay haystaan ​​saldhig daawade oo ku filan si ay lacag uga helaan Twitch.
Haddii aad rabto inaad si joogto ah uga kasbato Twitch, waxaad u baahan tahay inaad noqoto Xiriiriye Twitch ah. Ku biirista barnaamijka Xiriirinta Twitch, waxaad u baahan tahay inaad la kulanto shuruudaha soo socda:
Socodka ugu yaraan 8 saacadood 30-kii maalmood ee la soo dhaafay
Socodka ugu yaraan 7 maalmood 30 ka maalmood ee la soo dhaafay
Hesho ugu yaraan 3 daawadayaasha durdurkiiba
Lahaanshaha raacsan ugu yaraan 50
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto in Twitch ay kuu noqoto il dakhli oo halis ah, markaa waa inaad isku daydaa oo aad noqotaa lammaane Twitch ah. Taas awgeed, waxaad u baahan tahay inaad kordhiso saldhiggaaga taageerada heerkaas oo Twitch uu ku siinayo fursad aad ku noqoto lammaane.
Haddii aad ku cusub tahay Twitch, waa inaad diirada saartaa horumarinta xirfadahaaga qulqulka iyo dhisidda kuwa soo socda. Waxaad u baahan tahay inaad lahaato wax badan oo soo socda ka hor intaadan ka fikirin inaad lacag ka samayso Twitch. Dhisida waxyaabaha soo socda waxay qaadan kartaa waqti aad u badan. Si loo gaabiyo habka, waad awoodaa iibso daawadayaasha Twitch si toos ah.
Waa kuwan dhowr siyaabood oo aad uga kasban karto Twitch:
Xidhiidhada xiriirka ah
Tani maaha in lagu khaldo Barnaamijka Xiriirinta Twitch. Ku biirista barnaamijyada xiriirka ee noocyo kala duwan waa mid ka mid ah siyaabaha caadiga ah ee dadku ay uga kasbadaan Twitch.
Moodooyinka suuqgeynta xiriirka la leh, xiriirku wuxuu kasban karaa komishanka suuq-geynta badeecadaha nooc kale. Caadiyan, waxaa lagu siinayaa iskuxir la habeeyey oo lagu aado mareegaha halkaas oo iibsadayaasha iman kara ay wax uga iibsan karaan alaabta. Haddii kuwa raacsan Twitch ay gujiyaan isku xirka oo ay iibsadaan, calaamaddu waxay ku siin doontaa komishan taas.
Amazon waxa ay waddaa mid ka mid ah barnaamijyada xiriirinta ugu caansan adduunka oo lagu magacaabo Gear on Amazon. Maaddaama Twitch ay leedahay Amazon, waxay si gaar ah ugu fududaanaysaa durduriyayaasha Twitch inay noqdaan kuwa ku xidhan Amazon.
Iibinta badeecadaha gaarka ah waa hab kale oo caan ah oo ay Twitch baahinta lacag ku kasban karaan. Si kastaba ha ahaatee, ilaa aad leedahay taageerayaal badan mooyaane, dad badani ma rabaan inay badeecad ka iibsadaan qof aanay waligood maqlin. Si kastaba ha noqotee, haddii aad magac caan ah ku tahay Twitch, taageerayaashaadu waxay ku farxi doonaan inay lacag ku bixiyaan badeecadaada la habeeyey. Haddii aad rabto inaad kordhiso Twitch-kaaga soo socda, waa inaad iibsataa daawadayaasha Twitch.
Dejinta dukaanka khadka tooska ah iyo ku xidhidhiyaha boggaga Twitch ayaa laga yaabaa inay tahay habka ugu fudud ee lagu iibiyo badeecadaha gaarka ah. Waxaad ku xayeysiin kartaa dukaankaaga khadka tooska ah quudintaada, adoo ku hagaya taageerayaashaada dukaanka khadkaaga.
Waa inaad noqotaa Twitch Affiliate ama lammaane si aad marin u hesho Twitch Bits, kuwaas oo ah deeqaha yar ee daawadayaasha. Bits waa lacag macmal ah oo daawadayaasha ay ku bixin karaan goobta cayaaryahanka ay jecel yihiin.
Daawadayaasha Twitch waxay ku farxi karaan baahinta ay jecel yihiin Bits. Marka daawadayaashu ay farxaan, waxay bixin karaan Bits si ay uga qaybqaataan sheeko ku saabsan kanaal gaar ah. Bits sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa iibsashada emotes ee lagu sheekeysto. Inta uu weyn yahay oo uu ka sii xamaasad badan yahay emotiga, ayaa qiimihiisu sarreyaa.
Kahor intaadan deeqaha ka codsan boggaga, waxaad u baahan doontaa inaad samaysato xiriir adiga oo isticmaalaya habka lacag bixinta onlaynka ah, sida Paypal ama Stripe. Waxaad ku bixin kartaa faahfaahintan lacag bixinta qulqulkaaga markaad codsanayso deeqaha.
Isticmaalka bogga internetka ee qolo saddexaad sida Patreon waxay ka dhigi kartaa ururinta tabarucaad mid aad u fudud. Waxaad u baahan doontaa inaad marka hore dejiso astaanta Patreon ka dibna ku xidho akoonkaaga Twitch. Xidhiidhada iyo la-hawlgalayaasha waxay Twitch ka helaan ilaa boqolkiiba Bit kasta oo ay taageerayaashu ku bixiyaan kanaalada.
Twitch waa goobta ay tagaan ciyaartoyda iyo kuwa xiiseeya ciyaaraha adduunka oo dhan. Daawadeyaashu waxay u janjeeraan inay ku sii nagaadaan goobtan in ka badan marka loo eego aaladaha kale ee warbaahinta bulshada.
Sidaa darteed, waa goobta ugu fiican ee summadaha kuwaas oo bartilmaameedkoodu yahay ciyaartoy.
Noocyada dareemaya xidhiidh dabiici ah oo ay la leeyihiin dhegaystayaal gaar ah ayaa dareema dhiirigelinta inay kafaala qaadaan oo ay galaan suuqgeyn saamayn ku leh. Shirkadaha ka iibiya alaabada cayaartoyda waxay si weyn uga faa'iideysan karaan kafaalaqaadka Twitch. Tan waxaa ka mid ah noocyada iibiya consoles-yada ciyaarta, kombayutarada, taleefannada casriga ah, agabka, moodada, muusiga, iyo in ka badan.
Astaantu waxay kafaala qaadi kartaa streamer kasta oo Twitch ah, dhib malahan haddii aadan ahayn Xiriir ama Shuraako. Si kastaba ha ahaatee, sida dhammaan kiisaska suuq-geynta saamaynta leh, calaamaddu waxay jeclaan lahayd oo keliya inay la shaqeyso baahinta kuwaas oo saameyn ku yeelan kara go'aan-qaadashada taageerayaashooda. Sidaa darteed, aad bay dhif u tahay warfidiyeenada leh taageerayaal yar inay helaan heshiisyo kafaala qaad ah. Waa inaad soo iibsataa daawadayaasha si aad u kordhiso kuwa raacsan oo aad u noqoto mid soo jiidasho leh sumadaha.
Hab kale oo ay ciyaartoydu lacag uga helaan Twitch waa inay ciyaaraan tartamada oo ay guulaystaan. Nasiib darro, doorashadan badanaa waxay ku xaddidan tahay ciyaartoyda xirfadleyda ah sababtoo ah inta badan way ku adag tahay ciyaartoyda celceliska ah inay garaacaan iyaga.
Ciyaartoyda yaryar ayaa laga yaabaa inay awoodaan inay la galaan tartamada GameBattles ee MGL ama ESL oo ay lacag ka helaan baahinta tartanka markaad ciyaareyso.
Soo-saareyaashu waxay dhalin karaan dakhli soo noqnoqda iyada oo loo marayo is-diiwaangelinta Twitch. Taageerayaashaadu waxay ku biiri karaan kanaalkaaga lacag bixinta bishii $4.99, $9.99, ama $24.99. Caadi ahaan, kala badh lacagta la ururiyo waxay aadaysaa Twitch, laakiin qaar ka mid ah durduriyeyaasha ayaa awooday inay ka wada xaajoodaan dhimis sare naftooda.
Marka aad noqoto Twitch Affiliate ama Partner, badhanka rukunka ayaa si toos ah uga muuqda boggaaga. Waxaad isticmaali kartaa digniinaha si aad ugu dhiirigeliso taageerayaashaada inay ku biiraan kanaalkaaga. Calaamadaha aad aragto waxay ku soo baxayaan kanaalka gamer-ka aad jeceshahay oo sheegaya in qof uu kanaalka ku biiray waa digniin. Ogeysiisyadani aad bay caan uga yihiin isticmaalayaasha jecel inay magacooda ku arkaan bogga ciyaartoyga ay jecel yihiin.
Ikhtiyaarada dheeraadka ah ee Twitch Partners
Dhawr doorasho oo dheeri ah oo lagu kasbado lacag ayaa si gaar ah u heli kara Twitch Partners kaliya. Barnaamijka Iskaashiga Twitch waa martiqaad kaliya. Si ka duwan barnaamijka Xiriirinta, barnaamijka Partner ma laha wax shuruud ah oo la daabacay oo u-qalmitaanka. Si kastaba ha ahaatee, durduriyeyaasha soo saara nuxur weyn oo leh heerar sare oo daawasho ah waxay u badan tahay in lagu martiqaado si ay u noqdaan lammaane. Tani waa sabab kale oo ay tahay inaad diirada saarto kordhinta daawashadaada oo, sidaa darteed, bixiso qarashka daawadayaasha Twitch live.
Siyaabaha kale ee Twitch Partners ay lacag ku samayn karaan waa:
Iibinta ciyaaraha iyo alaabta ciyaarta dhexdeeda
Shuraakada Twitch ahaan, waxaad ka iibin kartaa ciyaaraha iyo walxaha ciyaarta ee boggaaga. Waxaad ka heli kartaa 5% dakhliga aad ka soo gasho iibkan.
Haddii aad ciyaareyso ciyaar ay Twitch iibiso ama ay leedahay walxo ciyaarta dhexdeeda ah oo aad ku iibiso, markaas sanduuqa iibka ayaa si toos ah uga muuqda boggaaga ka hooseeya shaashadda fiidiyowga. Haddii daawade wax ku iibsado adigoo gujinaya sanduuqa, waxaad helaysaa 5% dakhliga. Si toos ah ayay u dhacdaa, oo uma baahnid inaad wax samayso Shuraakada Twitch ahaan.
Inkasta oo sanduuqa iibku uu ka soo muuqan karo bogga dhammaan streamers, kaliya Twitch Partners ayaa hela qayb ka mid ah goynta.
Shuraakada Twitch ahaan, waxaad dooran kartaa inaad ku ciyaarto xayeysiisyada qulqulkaaga. Waxaad sidoo kale dooran kartaa inta jeer ee aad rabto inaad socodsiiso xayeysiisyada. Waxaad xayaysiisyada ku wadi kartaa 30 ilbiriqsi ilaa 3 daqiiqo, waase haddii ay jirto farqi 8-daqiiqo ah oo u dhexeeya xayaysiisyada. Sida YouTube, Twitch sidoo kale waxay la wadaagtaa dakhligeeda xayaysiisyada Shuraakada. Lacagta badan ee madalku samaysato, waa in badan oo ay ku siiso.
Twitch ayaa ku siinaya CPM-guud, kaasoo ah qiimaha 1000kii aragti. Si kastaba ha ahaatee, CPM ma aha mid joogto ah sanadka oo dhan. Taasi waa sababta oo ah shirkadaha ciyaaraha waxay bixiyaan wax badan xayeysiisyada inta lagu jiro soo saarista alaabta ama inta lagu jiro xilliga fasaxa. Sidaa darteed, adoo socodsiinaya xayeysiisyada waqtiyadan, waxaad kasban kartaa wax badan.
Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal badan oo Twitch ah ma jecla xayeysiisyada, markaa waa inaad tijaabisaa si aad u aragto xayeysiisyada ka soo horjeeda dhagaystayaashaada. Dhigista xayaysiisyada badan waxay ka cadhaysiin kartaa dhagaystayaashaada.
Maxaad u iibsanaysaa daawadayaasha Twitch si toos ah?
Ka sokow kordhinta tirada daawadayaasha aad haysato, waxaa jira sababo kale oo ay tahay inaad u iibsato daawadayaasha Twitch. Lahaanshaha dad badan oo soo socda kaliya kama tago raad weyn dadka eegaya qulqulkaada laakiin sidoo kale waxay ku siinaysaa akoonkaaga caddayn bulsho oo aad loogu baahan yahay.
Markaad iibsato daawadayaasha tayada sare leh, waxaad si weyn kor ugu qaadi kartaa akoonkaaga, kor u qaadida awoodaada wax-soo-saarka isla waqti isku mid ah. Marka dadka cusub ay arkaan daawadayaasha tayada sare leh ee daawanaya durdurradaada, waxaad kaga tagi kartaa iyaga oo cajab galiyay si toos ah fiidmeerta.
Runtu waxa ay tahay, mar kasta oo daawadayaashaadu bataan, waa korodhka heerka daawashada ee aad helayso. Marka la eego heerka daawadayaasha sare, waxaad ka dhigi kartaa qulqulkaada inay sidoo kale sare u kacaan. Marka la eego heerka daawashada ku filan oo sarreeya, durdurradaadu waxay xitaa noqon karaan fayrus. Ka dib oo dhan, daawadayaasha badan ee aad leedahay, inta badan caan ka channel aad noqon. Mar kasta oo kanaalkaagu uu sii caan baxayo, waxa aad ku kala sarraysaa liiska isbeddellada Twitch, oo kaa caawinaya inaad dad badan la xidhiidho oo aad ballaadhiso dhegaystayaashaada.
Markaad haysato daawadayaal badan, durdurradaada Twitch sidoo kale aad bay u fududahay in la helo. Waxaad ka muuqan doontaa boggaga isbeddelaya, ka caawinta dad badan inay helaan durdurradaada kordhinta daawashadaada. Haddii aad kaliya ku leedahay wax yar oo raacsan akoonkaaga, waa inaad iibsataa daawadayaasha si aad dad badan uga dhigto socodkaaga. Markaad wax yar ku maalgeliso kobcinta akoonkaaga, waxaad si toos ah u caawin kartaa koontadaada inay si dabiici ah ugu koraan Twitch.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad had iyo jeer hubisaa in haddii aad iibsato daawadayaasha Twitch, waa inaad sidoo kale iibsataa kuwa tayo sare leh. Iibsashada daawadeyaal tayo hooseeya oo badan ayaa laga yaabaa inay kuu muuqdaan kuwo wanaagsan muddo gaaban, laakiin faa'iidooyinku halkaas ayay ku dhammaanayaan. Daawadayaasha tayada hooseeya waxay leeyihiin xajin xun, taasina waxay waxyeelo u geysataa akoonkaaga marka loo eego wanaagga. Heerka haynta xun waxay ka dhigan tahay in daawadayaashan ay joojiyaan daawashada durdurradaada muddo ka dib. Waxay si cad ugu caddaynaysaa daawadayaasha kale in aad spam ku leedahay akoonkaaga.
Isticmaalka spam si aad hore u hesho waa la hoos u eegaa, qofna ma rabo inuu la xidhiidho kanaalka taas sameeya. Daawadayaasha tayada hooseeya waxay akoonkaaga ka dhigi doonaan mid aan caan ahayn si dhakhso ah, markaa ka fogee iyaga.
Sideed uga faa'iidaysataa marka aad bixiso daawadayaasha Twitch tooska ah?
Si aad u fahamto faa'iidooyinka, waxaad u baahan tahay inaad marka hore fahamto sababta dad badani u doortaan inay iibsadaan daawadayaasha tooska ah. Iyadoo la tixgelinayo tirada dadka isticmaalaya Twitch hadda, waa meesha saxda ah ee la joogo. Koritaanka kanaalka Twitch kaligaa waa arrin adag. Marka la eego in tartan weyni ka jiro goobta wax walba oo gacanta lagu sameeyo waxay noqon kartaa wax aan macquul aheyn.
Lahaanshaha taageerayaal badan oo madal ah waxay ka caawisaa nuxurkaagu inuu si ka wanaagsan u sameeyo algorithmamka Twitch. Markay taasi dhacdo, waxaad helaysaa gaadhi dabiici ah oo badan adigoon wax badan qaban dhamaadkaaga. Waa inaad lacag ku bixisaa daawadayaasha tooska ah si ay u kordhiyaan kuwaaga soo socda, laakiin waa inaysan ku dhamaanin taas. Waa inaad hubisaa inaad abuurto ka-qaybgal dhab ah daawadayaashaada sababtoo ah Twitch wuxuu si fudud u aqoonsan karaa ka-qaybgalka beenta ah.
Faa'iidooyinka kale ee iibsashada daawadayaasha Twitch waxaa ka mid ah:
Soo jiidashada dad badan
Marka aad ku leedahay tiro muuqda oo aragtiyo ah iyo kuwa raacsan kanaalkaaga, suurtogalnimada dadka kale inay soo booqdaan kanaalkaaga ayaa kordha. Waa dabeecadda aadanaha in dadku ay si toos ah u soo jiitaan shay leh taageerayaal badan. Markaad soo bandhigto waxyaabo tayo wanaagsan leh, waxaad si fudud ugu beddeli kartaa daawadayaasha cusub ee soo booqda kanaalkaaga kuwa raacsan.
Waxay kordhisaa korriinka dabiiciga ah
Markaad iibsato daawadayaasha tooska ah ee Twitch, waxay kordhisaa kuwa soo socda waxayna kor u qaadaysaa aragtidaada goobta Twitch. Muuqaal badan ayaa u tarjuma aragtiyo dabiici ah iyo kuwa raacsan. Marka ay u fududaato in kanaalkaaga la ogaado, dad badan ayaa soo booqda kanaalkaaga, taas oo kuu oggolaanaysa inaad u beddesho kuwa raacsan.
Waxay ka caawisaa abuurista waxyaabo fiican
Haddii aad rabto inaad abuurto nuxur weyn, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato. Marka maskaxdaadu ay si joogto ah uga fekereyso siyaabaha aad ku kordhin karto tirada taageerayaasha, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad siiso dareenkaaga intaa le'eg. Waa inaad iibsataa daawadayaasha sababtoo ah markaa waxaad diirada saari kartaa kaliya macluumaadkaaga uma baahnid inaad ka walwasho korinta akoonkaaga. Markaad bixiso waxyaabo tayo sare leh, waxaad si toos ah u heli doontaa daawadayaal badan oo badan.
Waxay dhistaa kalsoonida
Lahaanshaha tiro badan oo taageerayaal ah waxay ku siinaysaa xasilloonida maskaxda inaad leedahay kanaal soo jiidasho leh oo dadku ay xiisaynayaan daawashada qulqulkaada. Waxay kor u qaadaysaa kalsoonidaada, waxaadna awoodi doontaa inaad bixiso waxyaabo badan oo soo jiidasho leh.
Kordhi awooddaada wax-soo-saarka
Waxaa jira siyaabo badan oo lacag looga helo Twitch. Si kastaba ha ahaatee, Twitch Partners iyo Affiliates waxay leeyihiin karti dakhli oo ka sarreeya kuwa isticmaala Twitch caadiga ah. Waxaad u baahan tahay inaad haysato wax soo socda oo la taaban karo si aad u noqoto Affiliate ama Partner. Markaad iibsatid daawadayaasha, waxaad dardar gelisaa habka aad ku noqon lahayd Xiriiriye ama Shuraako, taasoo kor u qaadaysa kartidaada aad ku kasban karto goobta.
10ka siyaabood ee ugu sarreeya ee lagu kordhiyo daawadayaasha tooska ah ee Twitch
Socodsiinta waxay noqon kartaa shaqo abaal marin leh, laakiin waxaad u baahan tahay inaad lahaato xeelad adag si aad u kordhiso daawadayaashaada Twitch.
Halkan waxaa ah 10-ka siyaabood ee ugu waxtarka badan ee kaa caawin kara inaad kordhiso daawadayaashaada tooska ah ee goobta.
1. Ku daadi ciyaaraha kanaalada yar iyo daawadayaal badan
Waxa kaliya oo aad si aan loo baahnayn u kordhin doonta tartanka hadii aad qorshayso in aad baahiso ciyaaraha ay horeba u daadihinayeen kanaalo kale oo badan. Sidoo kale, haddii aad go'aansato inaad ciyaarto ciyaar aan qofna maqlin, markaa sidoo kale uma badna inaad soo jiidato daawadayaasha cusub.
Fikrad ahaan, waa inaad baahinta ciyaaraha aad rabto inaad adigu ciyaarto. Si kastaba ha noqotee, haddii korriinka koontadaada ay tahay mudnaantaada, markaa way ka fiican tahay inaad ka sii darto ciyaaraha qaarkood marka loo eego kuwa kale. Ku bilow inaad raadiso qaybaha ciyaarta ee aan lahayn kanaalada tooska ah laakiin leh tiro badan oo daawadayaal ah. Tani waxay yaraynaysaa tartanka, waxayna ku siinaysaa muuqaal dheeraad ah goobta. Haddii daawade ay tahay inuu dhex maro boqol kanaal oo kale si uu u gaaro kaaga, sidee ayay taasi u kordhinaysaa daawadayaashaada?
Haddaba, sidee ku heshaa ciyaarahan oo kale? Waxaad isticmaali kartaa qalabka sida Twitch Strike si ay kaaga caawiyaan inaad hesho ciyaaro buuxiya shuruudaha. Qalabkani waxa kale oo laga yaabaa inay kuu sheegaan wakhtiga saxda ah ee aad ku shuban karto ciyaarahan oo kale.
Markaad ku shubto ciyaaraha kanaalada yar, waxaad kordhinaysaa fursadahaaga inaad ugu dhawaato xagga sare ee bogga. Waxay ka caawisaa daawadayaasha inay si fudud u ogaadaan ciyaartaada, kordhinta muuqaalkaaga iyo awooda kordhinta daawadayaasha tooska ah.
2. Samee taageere xoog badan dhufto ee kale
Nasiib darrose, Twitch ma laha wax nidaam ah oo ka caawin kara in la ogaado qulqulayaasha yaryar. Habka ugu wanaagsan ee lagu kordhin karo daawadayaashaada Twitch waa inaad abuurto taageere meel kale, gaar ahaan YouTube. Waxaad samayn kartaa fiidiyowyada YouTube ee nuxurka ciyaartaada. Haddii aad ku abuurto taageerayaal badan YouTube, waxaad ku dhex dari kartaa kanaalkaaga Twitch.
YouTube sidoo kale waa mid tartan badan, laakiin leh cilmi-baaris ku habboon ereyga muhiimka ah, tafatirka wanaagsan, thumbnail xooggan, iyo cinwaan wanaagsan, waxaad bilaabi kartaa inaad kobciso daawadayaashaada YouTube.
3. La xidhiidh daawadayaashaada
La falgalka iyo ka-qaybgalka dhagaystayaashaada ayaa laga yaabaa inay tahay habka ugu fiican ee aad ku kobcin karto kuwa soo socda Twitch. Waxa kale oo ay dadka ku haysaa inay ku soo noqdaan durdurradaada marar badan.
Isku day oo sii wad sheekada socota mar kasta oo aad si toos ah u socoto. Daawadayaashaadu waxay rabaan xoogaa sharaxaad ah markay daawanayaan qulqulka tooska ah. Waxaa jiri kara waxyaabo badan oo laga hadlo inta lagu jiro qulqulka tooska ah. Waxaad la wadaagi kartaa fikradahaaga ku saabsan ciyaarta, xeeladdaada, ama waxaad tixgelin kartaa ka jawaabista su'aalaha daawadayaashaada. Dabcan, ma aha lagama maarmaan in laga hadlo kaliya ciyaarta. Waxaad ka hadli kartaa wax kasta oo aad jeceshahay, ilaa inta aad ka dhigayso daawadayaashaada. Markaad abuurto bulsho, waxay sidoo kale ku biiri doonaan si ay ula falgalaan dhagaystayaal waaweyn.
Markaad diiradda saarto la-hawlgalayaasha iyo la-xiriirka daawadayaashaada, kanaalkaagu wuxuu noqon doonaa bulsho is-dhexgal leh. Waxaa intaa dheer, daawadayaashaadu waxay ka heli doonaan qiimaha durdurradaada sababtoo ah hadda ma noqon doonto shisheeye kaliya oo ciyaaraya ciyaarta fiidyaha. Dhegaystayaasha ku hawlan waxay ka dhigan tahay heerar sare oo haynta daawadayaasha iyo kuwa raacsan goobtaada.
4. Dooro wakhtiga saxda ah
Todobaadka oo dhan waxaa jira waqtiyo ka wanaagsan in la sii daayo marka loo eego kuwa kale. Waxaa jiri kara waqtiyo marka ciyaar gaar ah ay ka buuxaan durduriyeyaasha kale, taas oo adkeynaysa in qulqulaha yar la dareemo. Tusaale ahaan, haddii aad raadinayso inaad hesho daawadayaal cusub, wakhtiga ugu xun ee la daawado laga yaabaa inay tahay xilliga fasaxa. Taasi waa sababta oo ah qul-qulayayaal badan ayaa xor u ahaan doona inay qulqulaan, halka daawadayaashu ay ku mashquulsan yihiin qorshahooda fasaxa.
Xulashada wakhtiga saxda ah ee qulqulka qulqulka waxay xaqiijin kartaa in kanaalkaaga si fudud loo helay, kaa caawinaysa inaad soo jiidato daawadayaal badan.
5. Isticmaal ciwaanka durdurka soo jiidashada leh
Haddii aad u malaynayso in ciwaanka socodkaagu aanu ahayn mid muhiim ah, ma aad khaldami kartaan. Inta badan daawadayaasha waxay ku qulqulaan kanaalka uu soo jiitay ciwaanka oo keliya. Waxa ay mudan tahay in aad la timaado cinwaan xiiso leh ama kaftan badan. Waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso inaad isticmaasho ereyada la xiriira ciyaarta ama xitaa su'aalaha. Cinwaanka madadaalada qosolka leh waxay u badan tahay inuu dadka ka dhigo inay gujiyaan kanaalkaaga.
6. Asal ahaan
Marka ay jiraan kumanaan streamers on Twitch, sidee baad u taagan tahay? Runtu waxa ay tahay, inta badan streamers-yaashan waxa ay ciyaaraan isla ciyaarood waxayna bixinayaan waxyaabo la mid ah kuwa kale.
Taasi waa sababta asal ahaan ay muhiim u tahay. Waa inaad la timaadaa fikrado ka dhigaya socodkaaga mid gaar ah.
7. Si joogto ah oo joogto ah u qulquli
Haddii aad rabto inaad ku kasbato taageerayaal daacad ah Twitch, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah oo joogto ah u qulquli karto. Way fiicantahay haddii aad ku adkaysan karto jadwal joogto ah. Waxaad samayn kartaa jadwal oo aad la wadaagto daawadayaashaada maadaama ay kor u qaadi doonto kalsoonida oo ay ku dhiirigelinayso daawadayaasha inay si joogto ah u daawadaan durdurradaada.
Marka aad haysato jadwal qul-qulaya oo joogto ah, waxa aad isu dhigaysaa xirfadle si dhab ah u qaadata baahinta tooska ah. Jadwal la'aan, daawadayaasha adiga ku jecel ma garanayaan goorta ay soo laabanayaan, si ay ugu gudbaan qof cusub. Markaad ku dhegganaato jadwal, waxaad mar horeba ka soocday kumanaan kale oo durduriyeyaasha ah kuwaas oo aan lahayn jadwal u yaal.
8. U soo bandhig dhagaystayaashaada qiimo
Haddii aad rabto in Twitch uu kuu noqdo ilo dakhli oo xoog leh, waxaad u baahan tahay inaad ula dhaqanto kanaalkaaga sidii ganacsi. Taas macnaheedu waa durdurradaadu waa alaabtaada daawadayaashaaduna waa macaamiishaada. Sida ganacsi kasta oo kale, waa inaad macaamiishaada u soo bandhigtaa qiimo, ama waxay u gudbi doonaan tartamayaashaada.
Haddii aad rabto inaad soo jiidato daawadayaasha cusub oo ku celiso kanaalkaaga Twitch, waa inaad siisaa wax qiimo leh. Taasi waxay siin doontaa sabab ay ku daawadaan durdurradaada halkii ay ka ahaan lahaayeen malaayiin kale oo laga heli karo goobta.
9. Samee Server Discord
Haddii aad rabto inaad kobciso bulshadaada qulqulka leh, haysashada server-kaaga Discord waa hab fiican oo sidaas lagu sameeyo. Waxa ugu fiican ee ku saabsan Discord waa inaad la falgeli karto daawadayaashaada markaad qulqulayso, iyo xitaa marka aanad joogin. Aad bay u fududahay in la dejiyo oo aad u qalanto wakhtigaaga. Kanaalka Discord wuxuu siinayaa bulshadaada meel aad degto xitaa marka aadan sii dayn.
Qaar ka mid ah daawadayaasha ayaa kaliya xiisaynaya daawashada qulqulka qulqulka, laakiin qaar ayaa raadinaya bulsho ay qayb ka noqdaan. Abuuritaanka server-kaaga Discord, waxaad ku dhiirigelin kartaa daawadayaasha noocaan ah inay ku raacaan, kordhinta daawadayaashaada iyo raacitaankaaga.
10. Iibso daawadayaasha tooska ah
Ma jiraan wax ka sarreeya nuxurka iyo ka-qaybgalka weyn. Si kastaba ha ahaatee, nuxurka weyn waxba ma qaban karo haddii aysan jirin cid daawata. Haddii aad ku cusub tahay Twitch oo aad rabto inaad kordhiso kuwa soo socda, waa inaad bixisaa kharashka daawadayaasha.
Si kastaba ha ahaatee, aad bay muhiim u tahay in la isticmaalo kaliya shirkado tayo sare leh sida Streamular marka aad korayso koontada Twitch. leh Streamular, waxaad helaysaa daawadayaasha Twitch si toos ah u daawadayaal ah oo aan ahayn bots. Daawadeyaashani waxay si dhab ah ula falgeli doonaan macluumaadkaaga oo ay sare u qaadi doonaan heerka hayntaada. Sidoo kale, daawadayaasha si tartiib ah ayaa loo dhiibaa si ay ugu ekaato in akoonkaaga uu u korayo si dabiici ah. Daawadayaasha tayada sare leh ayaa aad muhiim u ah haddii aad rabto inaad kobciso kanaalkaaga oo aad si fiican uga kasbato Twitch.
Weli ma waxaad ku jirtaa laba maskax oo ku saabsan inay tahay inaad iibsato daawadayaasha tooska ah? Haddii aad ka soo iibsato daawadayaasha tayada sare leh ee Streamular, waxay noqon kartaa maalgashi u qalma. Markaad iibsato daawadayaasha twitch toos ah, waxaad siinaysaa kanaalkaaga kor u qaadida aadka loogu baahan yahay si loo kordhiyo muuqaalka. Markaad hesho muuqaalkaas, waxay kuu fududaan doontaa inaad si dabiici ah u koraan waxyaabaha soo socda. La xidhiidh khabiirada jooga Streamular haddii aad raadinayso iibso daawadayaasha Twitch si toos ah.